Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 26/09/2020)
France iri nyika yakanaka yakawanda zvikwanisike dzakasiyana nokuda mugero kana chikepe zororo. Zvishomanana kumatunhu romuFrance aunonyanya panyaya: ari midi, kudunhu Aquitania, uye Camargue. Mumwe nomumwe wavo ane nemamwe unhu.
The yokutanga Canal Du midi, Nyika Heritage Site uye mukuru chakagadzirwa gang mu Europe kuti achiri kunotevera kosi yacho yepakutanga. basa iri Pierre Paul Riquet kuvakwa 1681. Munziramo, cruising pasi midi, unogona kuona Le Somail uye Carcassonne, maviri fadza Ages misha. Uye kana uchida chikafu Chakanaka uye waini zvikuru, unogona kuedza midi wakakurumbira Minervois uye Corbieres, uye cassoulet, munhu zvomunharaunda delicacy.
Chii kunyanya fadza ndechokuti munzira unogona kuona dzinokatyamadza dzoushe, Ages nematende, uye sokunofadza maguta ekare. Uye avo vanoda zvisikwa Achawedzera kunakidzwa unspoiled renje uye hunova ari mhuka.
Zvadaro pane Ypres, zvinoshamisa nzvimbo izere dzakaitika kukosha uye akasiyana Flemish zvinotyisa, ruzha, uye siyana. Maseiri ako nzira kuna inonaka zveBelgium dzakaitwa nemaoko Chocolates, kana vakagwinya uye akasimba beers zveBelgium. The nyika ndigokugamuchirai pamwe yakachena rinofadza vose pfungwa.
No mazita yakanakisisa dzokugara European anogona kuva wakakwana pasina Netherlands. Izvozvo zvinosanganisira dzokugara kuti ape yakanakisisa gwara uye chikepe mazororo mu Europe. Nyika waterways vaifanira kuwana nzvimbo yayo pachikwata, nokuda kwayo dzinokatyamadza maonero, yevedza migwagwa uye kudekara uye norunyararo dzengarava.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#canal #riverboat #rwendo europetrains eurotrip trainjourney